सरकारले अस्पतालसँग माग्यो खोप लगाएका र नलगाएकाको विस्तृत तथ्यांक | Hitkhabar
जेठ २०, २०७८ । सरकारले कोरोना संक्रमणविरुद्ध खोप प्रभावकारिता सन्दर्भमा अस्पतालसँग तथ्यांक मागेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा निर्देशक डा. तारानाथ पोखरेलका अनुसार अस्पतालसँग खोप लगाएका र नलगाएकाको विस्तृत तथ्यांक माग गरिएको हो ।
‘अस्पतालमा मृत्यु, भर्ना, परीक्षण गरेर कोरोना पोजेटिभ आए-नआएकाले खोप लगाएको वा नलगाएको रिपोर्ट माग गरेका छौं,’ डा. तारानाथ पोखरेलले भने, ‘त्यसपछि विस्तृत विवरण थाहा होला ।’ उनले प्राप्त जानकारीको हवाला दिँदै खोप नलगाएकाको मृत्युदर अत्यधिक रहेको पनि उल्लेख गरे ।
त्यस्तै, पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर १ सय १ संक्रमितको मृत्यु भएको छ । बुधबार ७ हजार २ सय १९ जना संक्रमित निको भएका छन् । हाल, १ हजार ४ सय ४६ आईसीयू र ३ सय ८५ संक्रमित भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन् । प्रदेश १ मा २ सय ३२ आईसीयू र ६३ भेन्टिलेटर, प्रदेश २ मा १ सय १२ आईसीयू र २८ भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन् । बाग्मती प्रदेशमा ७ सय ९ आईसीयू र २ सय ३० जना भेन्टिलेटरमा छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा १ सय ३७ आईसीयू र २६ भेन्टिलेटर, लुम्बिनी प्रदेशमा १ सय ६९ आईसीयू र २० भेन्टिलेटर, कर्णालीमा ४७ जना आईसीयू र ७ जना भेन्टिलेटर, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४० आईसीयू र ११ जना भेन्टिलेटरमा छन् । यो खबर राजधानीमा प्रशान्त वलीले लेखेका हुन्।
← चुरे दोहन: व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा तराई-मधेसलाई मरुभूमि बनाउने षड्यन्त्र
दीगो इ८ विद्युतीय कारको मूल्य घट्यो →
September 20, 2019 Hitkhabar 0
January 31, 2019 Hitkhabar 0
December 14, 2018 Hitkhabar 0